You are at Home देश Page 26
बोहरामाथि भएको आक्रमणप्रति पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं,जेठ १८ । नेपाल पत्रकार महासंघ कारोबार प्रतिष्ठान शाखाका सदस्य शिव बोहरामाथि भएको आक्रमणको नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्ष जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस नुवाकोट कार्यसमितिका सचिव रमेश महतले नुवाकोटका भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्ने जस्तापातामा अनियमितता बारे प्रष्ट्याउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोहरामाथि कांग्रेसको कार्यकर्ताले जेठ १७ गते भएको सांघातिक हमला गरेका थिए । उक्त हमलाको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको महासचिव उजिर मगरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ…
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको खतरा
चितवन,जेठ १८ ।बिनाशकारी भूकम्पपछिका लगातारको पराकम्पनका कारण देशकै प्रमुख राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग र त्यसमा जोडिएको नारायणगढ मुग्लिन सडकमा यो वर्ष ठूलो पहिरो जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । चाइनिज र नेपाली भूगर्भ विशेषज्ञहरुको संयुक्त टोलीले राजमार्ग क्षेत्रभन्दा माथिका पहाड तथा चट्टानहरुको अनुसन्धान गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । अध्ययनका लागि सडक विभाग काठमाडौंले खटाएको प्राविधिक टोलीलाई डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले समन्वय गरेको थियो । डिभिजन…
चर्पी नभए सुवीधाबाट बञ्चित
वीरगञ्ज, १६ जेष्ठ÷घरमा चर्पी नहुनेहरु वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दिने सुवीधाबाट बञ्चित हुने भएका छन् । बिरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत बिष्णु कोईरालाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । वीरगन्ज ३० कुहडीमा संचालित पशुपालन सम्बन्धि पाँच दिने तालिमको आज उद्घाटन गर्ने क्रममा उनले आउने साउन महिना देखि चर्पी नबनाउनेलाई सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका हुन् । तालिम वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको सहयोग र ब्रिलीयन्ट यूवा क्लवको आयोजनामा शुरु…
राहत लिएर आएका राष्ट्रसंघका कर्मचारी चरेससहित पक्राउ
काठमाडौं जेठ १६ । भूकम्पपीडितका लागि राहत लिएर नेपाल आएका राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)का कर्मचारी चरेससहित पक्राउ परेका छन् । डब्लुएफपीको तान्जानियामा लजिस्टिक अफिसरका रूपमा कार्यरत जर्मन नागरिक इजमाइल अमिर एलमाहीलाई प्रहरीले बिहीबार चरेससहित पक्राउ गरेको हो । नेपालबाट फर्कने क्रममा प्रहरीले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । ५७ वर्षीय एलमाहीको साथबाट साढे ६ ग्राम चरेस बरामद भएको…
गणतन्त्र दिवसमा नेपाललाई गुगलको सम्मान
वीरगंज,जेठ १५। इन्टरनेट ‘जाइन्ट’ गुगलले नेपालको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आफ्नो होमपेजमा नेपालप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ। गुगल सर्चसँगै देखिने गुगलको अस्थायी लोगो गुगल डुडलमा शुक्रबार पशुपतिनाथ र स्वयम्भु देखिन्छन् जहाँ मैनवत्तीको उज्यालो देखिन्छ। आज हामी नेपालीहरुको शक्ति र धैर्यताको सम्मान गर्छौँ’, गुगलले लेखेको छ, ‘आजका दिन सन् २००८ मे २८ का दिन एक दशक लामो विद्रोह र आन्दोलनपश्चात नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। सात वर्षपछि…
युवा वैज्ञानिकले गरे भूकम्प आएको थाहा पाउने प्रविधिको सफल परीक्षण
काठमाडौं,जेठ १४ । नुवाकोटका युवा वैज्ञानिक राम,लक्ष्मण रिमालले भूकम्प आएको थाहा पाउने प्रविधिको सफल परीक्षण गरेका छन् । नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले र त्यसपछि निरन्तर रुपमा आईरहेको पराकम्पनपछि त्रसित मानिस त्रास विहिन रुपमा बाँच्नको लागि गरेका भूकम्प आएको थाहा पाउने प्रविधिको परिक्षण सफल भएको हो । युवा वैज्ञानिक रिमालले सो परीक्षणलाई सफल पार्न १० दिनदेखि प्रविधिको विकास गरी परीक्षण गरीरहेको जानकारी दिए । बुधबार १:१५…
भूकम्प पीडितलाई पठाएको ५० लाख किलो चामल गायब
काठमाडौं,जेठ १४ । भूकम्प प्रभावितका लागि बंगलादेशले पठाएको १० हजार मेट्रिक टन ‘१ करोड केजी’ चामलमध्ये ५ हजार मेट्रिक टन ‘५० लाख केजी’ बीचैमा गायब भएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहतस्वरुप बाँड्न ल्याइएको चामल कहाँ पुग्यो, कसैलाई पत्तो छैन। बंगलादेशी चामल सरकारको केन्द्रीय तथ्यांकमै भेटिँदैन। विदेशबाट आएका राहत सामग्रीको केन्द्रीय तथ्यांक तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले त झन् बंगलादेशबाट जेठ १२ सम्म ५० हजार…
काठमाडौ,जेठ १४ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया गएर फर्केका नेपाली कामदारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमै बैंकबाट ऋण पाउने भएका छन् । ‘कोरियाबाट फर्केका कामदारलाई उद्यमशीलता तालिम तथा सहुलियत ऋण प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा उद्यम ब्यवसाय गर्न चाहने नेपाली कामदारले निःशुल्क उद्यम तालिमका साथै पाँच प्रतिशत ब्याजदरमै २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने ब्यवस्था गरिएको हो । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा भने…
काठमाडौं केन्द्रविन्दु पारी बिहानै परकम्प, झड्का थाहा पाउनुभयो ?
काठमाडौं : बिहान ५ बजेर १२ मिनेट जाँदाको परकम्प महसुस गर्नुभयो ? बिहीबार बिहानलाई ४ म्याग्निच्युडको धक्कासहित स्वागत गरेको छ परकम्पले। यसपटक परकम्पको केन्द्रविन्दु रह्यो – काठमाडौं। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बिहान काठमाडौं केन्द्रविन्दु रहेको परकम्प महसुस भएको हो। हिजो राति १० बजेर २९ मिनेट जाँदा रसुवा – नुवाकोट केन्द्र पारी गएको परकम्पपछिको यो पहिलो कम्पन हो। राति १०:२९ मा ४.२ म्याग्निच्युडको परकम्प गएको…